ပုဂံမင်း၏ မိဖုရားခေါင် ကို ခရစ်နှစ် တွင် မွေးဖွားသည်။ ခမည်းတော်မှာ ဗဒုံမင်း ၏ သားတော် ပထမ မက္ခရာမင်းသား ဖြစ်ပြီး မယ်တော်မှာ ဗဒုံမင်း၏ သမီးတော် တကောင်း ကြံညှပ်မင်းသမီး ဖြစ်သည်။ ခုနှစ်တွင် ပုဂံမင်းသားနှင့် လက်ဆက်သည်။ ပုဂံမင်း အထွတ်အမြတ် ရောက်သောအခါ ...
မလွန်မင်းသား သည် မင်းတုန်းမင်း၏ ပထမ မြောက်ဆောင်တော် မိဘုရား ၏ သားတော်အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ပဘာဒေဝီ၏ သားတော်သမီးတော်များမှာ သားတော် သုသီရိမဟာ ဓမ္မရာဇာ ခေါ် မလွန်မင်းသား မောင်မျိုးရင်၊ သမီးတော်၊ သားတော် ဝန်းသိုမင်းသား သတိုးမင်းရဲ သီဟသူ တို့ ဖြစ်သည်။ သ ...
မိုးမိတ်ထိပ်ခေါင်တင်သည် မင်းတုန်းမင်း‎နှင့် စားပွဲတောင်တိုက်စားမိဖုရား‎တို့၏ တတိယသမီးတော် ဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးအမတော်နှင့် အငယ်ဆုံးမောင်တော်တို့မှာ ငယ်စဉ်ကပင် လွန်သွားခဲ့ပြီး အမတော် ပင်းထိပ်ခေါင်တင်‎သာ ကျန်ရှိသည်။ မိုးမိတ်ထိပ်ခေါင်တင် ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ...
မြင်ကွန်း မင်းသားနှင့် မြင်းခုံတိုင် မင်းသားတို့သည် မင်းတုန်းမင်းတရား မင်းမဖြစ်မီ အမရပူရအိမ်နိမ့်၌ စံတော်မူစဉ် ရွှေရေးဆောင် မိဖုရားမှ ဖွားမြင်သော သားတော်များဖြစ်သည်။ မြင်းကွန်းမင်းသားသည် ၁၂ဝ၅ ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်၍ ငယ် ...
ထိပ်စုမြတ်ဖုရား သည် သီ​ပေါကိုယ်​တော်နှင့် အရှင်နန်းမ​တော်တို့၏ တတိယသမီး​တော်ဖြစ်သည်။ပါ​တော်မူအပြီး မဒရပ်မြို့တွင်မှဖွားမြင်ခဲ့သည်။ပျက်သုဉ်းခဲ့သည့် မင်း​ဆွေမင်းမျိုးများ၏ တတိယ​မြောက်အကြီးအကဲဖြစ်သူဖြစ်သည်။ ၁၉၂၂တွင် က​နောင်မင်းသားကြီး၏​မြေး​တော် ထိပ ...
မြတ်ဖုရားက​လေး သည် မြန်မာတော်ဝင်မင်းသမီး ဖြစ်သည်။ အရှင်ထိပ်စုမြတ်ဖုရားလေး ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ဆက်တွင် နောက်ဆုံး ဖြစ်သော မြန်မာဘုရင် သီပေါမင်းနှင့် မိဖုရားခေါင် စုဖုရားလတ်တို့၏ စတုတ္ထသမီးတော် ဖြစ်သည်။
မြတ်ဖုရားလတ် သည် သီ​ပေါကိုယ်​တော်နှင့် နန်းမ​တော်တို့မှ ​ရွှေနန်း​တော်တွင်ဖွားမြင်​သော ဒုတိယသမီး​တော်ဖြစ်သည်။၂နှစ်အရွယ်တွင် ပါ​တော်မူခဲ့ရသည်။ရတနာဂီရိစံအိမ်​တော်တွင် ကျွန်​တော်ခင်​မောင်လတ်နှင့် ခိုးရာ​​ပြေးပြီး အင်္ဂလိပ်တို့က လက်ထပ်​ပေးခဲ့သည်။ဤအ​က ...
မြောင်လှမင်းသမီး သည် မင်းတုန်းမင်းနှင့် မိဖုရားငယ်ဖြစ်သော ကျောက်တလုံးရွာစားမိဖုရား သုသီရိဝဏ္ဏာတို့၏ တစ်ဦးတည်းသော သမီးတော်ဖြစ်ပြီး သက္ကရာဇ် ၁၂၂၆ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလ တွင် မွေးဖွားသည်။ ၁၂၄၇ခုနှစ် ပါ တော်မူသောအခါ မြောင်လှမင်းသမီးသည် အသက် ၂၁နှစ်သာ ရှိသေ ...
ရတနာနတ်မယ် သည် ဦးနေဝင်း ၏ စတုတ္ထ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်၏ဇနီး ဂုဏ်ပုဒ်ရရှိခဲ့သည်။ မိခင်မှာ ကနောင်မင်းသားအဆက်နွယ်ဖြစ်၍ ဖခင်မှာ ဩစတေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အမည်အားဖြင့် ဂျူးန် ရို့ဇ် ဘဲလာမီ ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ရွာပုလဲမိဖုရားသည် မင်းတုန်းမင်း၏ မိဖုရားတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ သီရိဥမ္မာဘွဲ့ရသည်။ အမည်ရင်းမှာ မယ်အုံ ဖြစ် သည်။ မိဖုရားစားရသော ရွာပုလဲသည် မြောင်မြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိသည်။ မိဖုရား၏ သင်္ချိုင်းစာတွင် ရွာဘလဲ ဟု ရေးထိုးထားသည်။ ရွာပုလဲမိဖုရားသည် မင်းတုန်းမင်းန ...
မြောက်နန်း မိဖုရား သီရိမဟာစန္ဒဒေဝီမှ ၁၁၂၄ နယုန်လပြည့်ကျော် ၉ ရက် တနင်္လာနေ့ ဖွားမြင်သည်။ ရွှေတောင်မင်း သတိုးဓမ္မရာဇာဟု ထင်ရှားသည်။ ငယ်မည်က မောင်ပေါ်ဟု ရခိုင် ရာဇဝင်တွင် တွေ့ရသည်။ ဗဒုံမင်းသည် သားတော်ကြီး ရွှေတောင်မင်းကို အလွန်မြတ်နိုး အားကိုးတော် ...
ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ပြင်စည်မင်းသားငါးပါး ရှိခဲ့သည့်အနက် ပြင်စည်မင်းသား မောင်ရွှေအိုင် သည် ပထမပြင်စည်မင်းသား ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းသည် အလောင်းမင်းတရား၏ ညီတော်အရင်း၏ မြေးတော်သူ ဖြစ်သည်။ မောင်ရွှေရ၏ အဘိုးမှာ အလောင်းမင်းတရား၏ ညီတော်အရင်း မင်းသားမောင်ရွှေရ ဖြ ...
ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီး နန်းတွင်းစာဆိုတော် အမြောက်အမြား ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာ ယင်းတို့အနက် မိဖုရားကြီး ရှင်မင်းသည် အဦးအဖျား ဖြစ်လေသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် ပထမပိုင်းတွင် ပေါ်ထွက်ခဲ့သူ ဖြစ်၍ မိဖုရားမမြကလေး၊ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင် မင်းသမီး တို့ထက် ပို၍ အလျင်က ...
လင်ပန်းတိုက်စားမိဖုရား သည် စစ်ကိုင်းမင်း ဘကြီး​တော် လက်ထက်က က​နောင်-မြန်​အောင် နှစ်မြို့ဝန် ဦးသာဖြူ နှင့် ဒုတိယဝန်က​တော် သခင်ကြီး ၏ သမီးဖြစ်သည်။ သက်ပန်းမိဖုရား၏ အစ်မရင်း ဖြစ်သည်။ ဦးသာဖြူ၏ ပထမဝန်က​တော် သခင်ကြီး မှ​မွေး​သော ​​​မြောက်နန်းမိဖုရား ခင် ...
ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ပြင်စည်မင်းသားငါးပါးရှိသည့်အနက် ပဉ္စမပြင်စည်မင်းသားမှာ ပြင်စည်မင်းသား သတိုးမင်းရဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မင်းတုန်းမင်းနှင့် ပထမမြောက်ဆောင်တော်မိဖုရား ပဘာဒေဝီတို့ သားတော် သုံးပါး၊ သမီးတော်တစ်ပါး ဖွားမြင်ခဲ့သည့်အနက် ဒုတိယသားတော် ဖြစ်သည ...
သီပေါမင်း ၁၈၇၈-၁၈၈၅ သည် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာဘုရင်စနစ်၏ နောက်ဆုံးမင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဘွဲ့တော်မှာ သိရီပဝရ ဝိဇယာနန္တ ယသတိလောကာ ဓိပတိ ပဏ္ဍိတ မဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇာ ဖြစ်ပြီး နန်းသက် ခုနစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ မင်းတုန်းမင်းနှင့် လောင်းရှည်မိဖ ...
သံပျင်မင်းသမီးသည် သက္ကရာဇ် ၅၃၆ခုနှစ် ပုဂံမြို့၌နန်းတက်တော်မူသော နရပတိစည်သူမင်း၏ အစွန်အဖျားဖြစ်သော သမီးတော်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ နရပတိစည်သူ မင်းကြီးလက်ထက် ကျမ်းဂန်သင်မြောက်ကျနပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သည် မင်းကြီး၏အမြိတ်အစွန်းမင်းသမီး ၌တပ်မက်၍မကျန်းမမာ ရပ်တ ...
ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်း တောင်ပိုင်း ဝင်္ကပါလမ်း နေအိမ်၌ အဖ ဦးအုန်းခိုင်၊ အမိ ဒေါ်ကြင်မေ တို့က ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၉ ယောက် အနက် သတ္တမမြောက် ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးကိုယု ဖြစ်သည်။ ပဲခူး ဟိုက်စကူး ကျောင် ...
အဖ ဦးလှိုင်၊ အမိ ဒေါ်စိန် တို့မှ ၁၉၂၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။ ငယ်နာမည် ဦးတင်ရွှေ၊ ကလောင် နာမည် မောင်စူးစမ်း၊ တောတွင်း နာမည် ဦးထွန်းဖေ ဦးချမ်းအေးသည် ကန်တော်ကလေး မြူကျောင်း၊ ဗဟို အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်း လသာ) တို့တွင် စစ်မဖြစ ...
စာရေးဆရာ ဇင်မော်ကို ၁၉၅၄ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီ လ ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးစိုးလှိုင်၊ အမိ ဒေါ်ငွေကြင် တို့မှ ဝေါမြို့နယ် နောင် ပတ္တရာကျေးရွာတွင် စတုတ္ထတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆၅ မှ ၁၉၇၁ တွင် အ.ထ.က ဗိုလ်တထောင်ကျောင်းတွင် တန်းမှ တန်းအထိ ပညာသင်ကြားသည်။ ၁၉၇၁ ခုန ...
သခင်တင်ကို ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် ‌ပျော်ဘွယ်မြို့၌ အဘ ရာဇဝတ်ဝန် ဦးမြတ်သာ၊ ‌ဒေါ်‌အေးမြတို့မှ ‌မွေးဖွားသည်။ ‌မွေးချင်းနှစ်‌ယောက်အနက် အငယ်ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က လက်ပံတန်းမြို့နယ် မဟာ‌ပေါင်းရွာ၌ မူလ တန်းပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ဖြူးမြို့တွင် ကြီးပြင်းလာရပြီး ‌ပေါင်းတည် ...
ဦးဖာသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြသည် ဦးဘဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့၏ ဖခင်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဘိုးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ဖက်မှာ ဒေါ်စုဖြစ်သည်။ မိဘများမှာ ဦးဒေကိုးနှင ...
ဂျပန်သို့ ပညာတော်သင်ရောက်စဉ် တိုကျိုတန်းမြင့်ကျောင်း၏ တွဲဘက်ကျောင်းဖြစ်သော တိုကျိုအငယ်တန်း တန်းမြင့်ကျောင်းတွင် တုတ်ထောက်ခုန်ကစားသမားဟောင်း ကျော်ဒင်က ဘောလုံးနည်းပြ လုပ်သည်။ ရှီဂျီယိုရှီ ဆူဇူကီ 鈴木 重義 ၏ ပန်ကြားချက်အရ ဝါဆီဒါအထက်တန်းကျောင်းသို့ ပ ...
မြင့်ဦး၊ သန့် ၂၀၀၆။ The River of Lost Footsteps - Histories of Burma ။ Farrar, Straus and Giroux။ ISBN 978-0-374-16342-6 ။ စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ အရှင် ၁၉၃၁။ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၁–၂ ၁၉၉၇ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: တက်လမ်းစာပေ။ CS1 maint: ...
မြင့်ဦး၊ သန့် ၂၀၀၆။ The River of Lost Footsteps - Histories of Burma ။ Farrar, Straus and Giroux။ ISBN 978-0-374-16342-6 ။ မြတ်စိုး, ed. ၁၉၆၄။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၉ ၁ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: စာပေဗိမာန်။ CS1 maint: unrecognized lan ...
Harvey၊ G. E. 1925။ History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824 ။ London: Frank Cass & Co. Ltd။ မြင့်ဦး၊ သန့် ၂၀၀၆။ The River of Lost Footsteps - Histories of Burma ။ Farrar, Straus and Giroux။ ISBN 978-0-374-16342-6 ။ မြတ်စိုး, ed ...
စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ အရှင် ၁၉၃၁။ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၁–၂ ၁၉၉၇ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: တက်လမ်းစာပေ။ CS1 maint: unrecognized language link မြင့်ဦး၊ သန့် ၂၀၀၆။ The River of Lost Footsteps - Histories of Burma ။ Farrar, Straus and Giroux ...
မြတ်စိုး, ed. ၁၉၆၄။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၉ ၁ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: စာပေဗိမာန်။ CS1 maint: unrecognized language link Harvey၊ G. E. 1925။ History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824 ။ London: Frank Cass & Co. Ltd။ မ ...
မြတ်စိုး, ed. ၁၉၆၄။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၉ ၁ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: စာပေဗိမာန်။ CS1 maint: unrecognized language link မြင့်ဦး၊ သန့် ၂၀၀၆။ The River of Lost Footsteps - Histories of Burma ။ Farrar, Straus and Giroux။ ISBN 978-0-374 ...
ပထမ စန္ဒဝိဇလရာဇာ သည် ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးနေပြည်တော်ကို ၁၇၁၀ ခုနှစ်မှ ၁၇၃၁ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ထိုမင်းလက်ထက်တွင်ရခိုင်ပြည်အတွင်း၌ သောင်းကျန်းနေသော ၁၇ ရာစု နှောင်းပိုင်းက ရခိုင်သို့ ထွက်ပြေးလာသည့် ဩရန်စစ်ဘုရင်ကြီး၏ ညီ အိန္ဒိယမင်း ...
စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ အရှင် ၁၉၃၁။ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၁–၂ ၁၉၉၇ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: တက်လမ်းစာပေ။ CS1 maint: unrecognized language link Harvey၊ G. E. 1925။ History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824 ။ London: Frank C ...
မြတ်စိုး, ed. ၁၉၆၄။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၉ ၁ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: စာပေဗိမာန်။ CS1 maint: unrecognized language link စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ အရှင် ၁၉၃၁။ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၁–၂ ၁၉၉၇ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: တက်လမ်းစာပေ။ ...
Harvey၊ G. E. 1925။ History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824 ။ London: Frank Cass & Co. Ltd။ စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ အရှင် ၁၉၃၁။ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၁–၂ ၁၉၉၇ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: တက်လမ်းစာပေ။ CS1 maint: unrecognized ...
မင်းရာဇာကြီး သည် ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးနေပြည်တော်ကို ၁၅၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၆၁၂ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဘုရင်ဖြစ်သည်။
မဟာသမ္မတ သည် ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးနေပြည်တော်တွင် ၁၇၈၂ ခုနှစ်မှ ၁၇၈၅ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဘုရင်ဖြစ်သည်။ မဟာသမ္မတသည် ရခိုင်ပြည်၏ နောက်ဆုံးဘုရင် ဖြစ်သည်။
စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ အရှင် ၁၉၃၁။ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၁–၂ ၁၉၉၇ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: တက်လမ်းစာပေ။ CS1 maint: unrecognized language link မြတ်စိုး, ed. ၁၉၆၄။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၉ ၁ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: စာပေဗိမာန်။ ...
မြင့်ဦး၊ သန့် ၂၀၀၆။ The River of Lost Footsteps - Histories of Burma ။ Farrar, Straus and Giroux။ ISBN 978-0-374-16342-6 ။ Harvey၊ G. E. 1925။ History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824 ။ London: Frank Cass & Co. Ltd။ စန္ဒမာလာလင်္ ...